Lionel Messi Oo Ka Hadlay Xaaladiisa Caafimaad Iyo Kulanka Uu Diyaarka U Yahay
HomeWararka CiyaarahaLionel Messi oo ka Hadlay Xaaladiisa Caafimaad iyo Kulanka uu Diyaarka u yahay
January 14, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France 0
Lionel Messi ayaa daaha ka qaaday in aanu si buuxda uga soo kabsan xanuunka Coronavirus laakiin waxa uu taageerayaasha Paris Saint-Germain ku wargaliyay in uu si dhakhso ah ugu soo laaban doono garoonka.
34-sano jirku wuxuu ka mid ahaa afar ciyaartoy, oo ay weheliyaan Sergio Rico , Juan Bernat iyo Nathan Bitumazala , kuwaas oo uu ku dhacay fayraska xilligii kirismaska.
Dhammaan afarta ciyaaryahan ayaa seegay kulankii French Cup ee ay la ciyaareen Vannes iyo sidoo kale dagaalka horyaalka heerka koowaad ee Lyon Axadii, laakiin kooxda caafimaadka ee PSG ayaa rajo ka qabay in afarta ciyaaryahan ay ku soo laabtaan safka hore ee isbuucaan.
Messi ayaa tan iyo markii uu soo galay Instagram -ka si uu u xaqiijiyo in uu ku soo laabtay tababarka laakiin habka uu uga soo kabsado COVID-19 ayaa qaatay “in ka badan intii aan moodayay”.
Messi ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay: “Sida aad ogtihiin in aan qabay COVID, waxa aan doonayay in aan idiin mahadceliyo dhammaan fariimaha aan helay oo aan kuu sheego in ay qaadatay waqti ka badan intii aan u malaynayay in aan caafimaad qabo laakiin waxa aan ku dhawaaday in aan soo kabsado, runtiina aad ayaan u sugayaa. in uu dib ugu soo laabto garoonka.
Messi ayaa qarka u saaran inuu seego kulanka PSG ee Ligue 1 ay habeen dambe la ciyaari doonto Brest iyo sidoo kale isreebreebka Koobka Adduunka ee Argentina ay la ciyaari doonto Chile iyo Colombia 28-ka Janaayo iyo 1-da Febraayo.